admin – Page 257 – Shabakadda Amiirnuur
Warye Shariifka: “Musuqmaasuq Daran Ayaa Ka Jira Wasaaradda Warfaafinta”
Wasaaradda warfaafinta ee dowladda federalka waxay kamid tahay wasaaradaha ugu musqmaasuqa badan iyadoo dadka madaxda ka ah ay yihiin kuwa markoodii hore kasoo shaqeyn jiray NGO-yada iyo ururada daneysiga iyo musuqmaasuqa ku caan baxay. Wariye Maxamad Shariif ayaa waxa uu sheegay in xarunta gudaheeda ay shaqaalaha Radio Muqdisho ku daadiyeen […]
Al-Shabaab oo La Wareegay Degmo Ka Tirsan Kenya.
Wararka ka imaanaya degmada Ijaara oo kamid ah Kenya ayaa sheega in ciidamada Xarakada Al-Shabaab ay habeenkii xalay ay halkaasi ka geysteen khasaarooyin culus kadib markii ay la wareegeen gacan ku heynteeda iyo xarumaha muhimka ah ee dowladda. Askartii dowladda Kenya ee joogay degmada ayaa cagaha wax ka dayay markii […]
Villa Soomaaliya oo Weerartay Guriga Cabdi Qeybdiid.
Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federalka ah ee Soomaaliya ayaa weerar ku qaaday maanta guriga Cabdi Qeybdiid oo kamid ah xildhibaanada aqalka sare ee Baarlamaanka. Askarta weerartay Qeybdiid oo laga soo amray madaxtooyada ayaa ah kuwa sida gaar ah u waardiyeeya xeyndaabka Villa Soomaaliya kuwaasoo sida aanu xogta ku helnay […]
Al-Shabaab oo Lacago Zako Ah Boqollaal Qoys Ugu Qeybiyay Duleedka Magaalada Muqdisho.
Maktabka diiwaanka Zakawaatka Wilaayada Banaadir ayaa duleedka magaalada Muqdisho ka qeybiyay Zakada Xoolaha nool balse lalacageeyay taasi oo ay ka faa’ideysteen Boqolaal ruux oo isugu jirta Fuqaro iyo Masaakiin. Xarakada Al Shabaab ayaa Labo Boqol oo Qoys Masaakiin iyo Fuqaro isugu jirta oo laga kala keenay degmooyinka Gobalka Banaadir u […]
C/raxmaan C/Shakuur oo Qortay Boqol Malleyshiyo Ah.
C/raxmaan C/shakuur oo kamid ah xubnaha ugu cadcad siyaasiyiihinta iyo axsaabta ku kacsan dowladda federalka ah ayaa qortay boqol malleyshiyo ah si ay uga waardiyeeyaan ciidamada dowladda. Askartan ayaa waxaa u keenay odayaal dhaqameedyadii markii isaga la xiray u ol’oleynayay sii deysmadiisa, waxaana illaa iyo hadda aan la ogeyn halka […]
Dibad Baxyo Waaweyn Iyo Rabshado Ka Bilowday Iiraan.
Shacabka dalka Iiraan ayaa sanado kadib wuxuu billaabay banaan baxyo waaweyn oo uu uga soo horjeedo siyaasadda maamulka dalka Iiraan ka dhisan. Maalintii shalay oo Jimco ahayd waxaa magaalooyin farabadan oo katirsan wadanka Iiraan ka dhacay bananabaxyo ballaaran kuwaas oo ay dhigayaan qeybaha kala duwan ee bulshada, waxaana dadku ay […]
Muxuu Salka Ku Hayaa Khilaafka Dowladda Iyo Siyaasiyiinta Mucaaradsan. (Warbixin+Dhageysi)
Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaa wali ka taagan khilaafkii ka dhaxeeyay dowladda federalka ah iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah. Dad isku dayay iney isku soo dhaweeyaan labada dhinac oo isugu jira odayaal iyo bulshada rayidka ayaa gacanta ka taagtay maanta oo jimco ahayd kadib markii ay labada dhinac kala […]
Sheegashooyinka Mareykanka Ee Duqeymaha Ka Dhanka Al Shabaab Oo Noqday Kuwa Aan la aamini Karin.
Sodonkii maalmood ee lasoo dhaafay dowladda Mareykanka ayaa soo saaraysay warar ku saabsan duqeymo ay ka geysatay deegaanno dhaca Koonfurta dalka Soomaaliya. Taliska ciidamada Mareykanka qaaradda Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa si aan ka fiirsasha laheyn u sheeganaya fulinta weeraro aan jirin arrinkaas oo dad badan shaki gelisay. Laba […]
Diiradda Jimcaha oo Lagu Soo Qaatay Mowduuc Ku Saabsan Qoyska. (Sawirro+Dhageysi)
Barnaamijka Diiradda Jimcaha oo ah todobaadle maanta oo kale ka baxa war-baahinta islaamiga ah ee Al-furqaan laguna falanqeeyo mawaadiic muhim ah ayaa waxaa usbuucan lagu soo qaatay qodob ku saabsan arrimaha qoyska iyadoo si gaar ah loo tiigsaday haweeneyda saalixadda ah. Barnaamika ayaa waxaa lagu wareystay haween kamid ah kuwa […]
Daawo Sawirro Munaasabad Ka Dhacday Ceelbuur: Dufcadii Labaad Oo Ka Qalin-jibisay Machadka Qurdubah.
Munaasabad Ballaaran ayaa ka dhacday xarunta dhexe ee Machadka Qurdubah oo ku taala degmada Ceelbuur ee gobalka Galgaduud taasi oo ay kasoo qeyb galeen maamulka,macalimiinta,ardayda machadka iyo marti sharaf kale. Munaasabadaan ayaa lagu sagootinayay Dufacadii Labaad oo ka qalinjibisay Machadka Qurdubah oo ah machad ay aas-aaseen dhalinyaro isu tagtay oo […]
« Previous 1 … 255 256 257 258 259 … 272 Next »